Vaovao - Stabilizer tsy misy poizina amin'ny PVC
Stabilizer tsy misy poizina amin'ny PVC
Ny stabilizer tsy misy poizina PVC dia ny stabilizer avo lenta tsy misy poizina mifototra amin'ny zinc, misy mangarahara vita amin'ny alàlan'ny siantifika mifangaro zinc tsy misy poizina sy synergista manokana.
Ny stabilizer maharitra hafanana maharitra an'ny stabilizer tsy misy poizinaPVC dia manana fahombiazana tena tsara, ary ny fitambaran'ny menaka soja epoxy dia misy fiantraikany lehibe amin'ny synergistic.
Ny mangarahara momba ny stabilizer tsy misy poizina PVC dia azo ampitahaina amin'ny organotin mercaptan.
Ny stabilizer tsy misy poizina an'ny PVC dia tsy misy fofona hafahafa ary manana ny asan'ny lubricant. Mora ny manaparitaka azy, tsy manindry na mamaoka izy.
Ny stabilizer tsy misy poizina PVC dia tsy miteraka fandotoana volo volo na fampiroboroboana ny fiovan'ny varahina.
Ny stabilizer tsy misy poizina PVC dia mety amin'ny fanodinana sy famokarana vokatra PVC malefaka mangarahara toa ny fantsona, membrane, board, kiraro, tariby ary tariby, kilalao sns.
Aimsea Founded dia orinasa teknolojia avo lenta manokan-tena amin'ny fampidirana ny fikarohana, ny famokarana ary ny fivarotana ny stabilizers PVC tiava tontolo iainana tsy misy poizina.
Ny stabilisatera dia ampiasaina betsaka amin'ny vokatra PVC, toy ny tariby sy tariby, fitaovana fitsaboana kilalao, vokatra mangarahara, vokatra kalandrie, fantsom-pipa, ravina haingon-trano, kiraro mihosin-kazo, mombamomba ny varavarana sy ny varavarankely, sns.
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny stabiliser-calcium zinc tsy misy poizina sy miaro ny tontolo iainana.
Fotoana fandefasana: Okt-31-2020
Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Stabilizer, Pvc Additives, Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile, Pvc Heat Stabilizer,